Xildhibaano ka tirasn DKMG ah oo Taageeray Baajinta Xildhibaanadii Shalay Safri lahaa – SBC
Xildhibaano ka tirasn DKMG ah oo Taageeray Baajinta Xildhibaanadii Shalay Safri lahaa
Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka DKMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ku taageereen celintii xildhibaanadii baarlamanka ee maalin nimadii shalay laga celiyay in ay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho.
Xildhibaanadan ayaa kulankooda ku sheegay in ay ku taageersan yihiin xukuumada gaar ahaan FKMG ah ee soomaaliya talaabadii celinta aheyd ee ay ku celiyeen safarkii xildhibaanadaasi
Waxay intaasi raaciyeen in xildhibaanadaasi ay ahaayeen kuwo ka tirsan gudi sharcidaro ah oo uu magacaabay gudoomiyaha Baarlamanka, iyagoona ku tilmaamay gudi aan jirin islamarkaana aanu awood u laheyn gudoomiyaha baarlamanka in uu magacaabo gudi.
Sidoo kale waxay ku eedeeyeen gudoomiyaha Baarlamanka Shariif Xasan Sh Aadan in uu isagu yahay ninka keliya ee jahwareerka ka dhexwada Baarlamanka DKMG ah.
Sikastaba ha ahaatee xildhibaanada Baarlamanka ee maanta ku shiray Muqdisho ayaa ku tilmaamay arin sax ah in laga baajiyo safarka xildhibaandaasi, iyagoona intaasi raaciyay in ay u socdeen arimo aan Sharciga ku jirin.
Maalin nimadii shalay ayay aheyd markii xildhibaano ka tirsan Baarlamanka gaar ahaan kuwo ka mid ahaa gudi uu magacaabay gudoomiyaha Baarlamanka DKMG ah kaas oo howshiisu aheyd doorashooyinka ka dhici doona dalka falal baajin iyo jirdil loogu geystay Garoonka weyn ee Aadan Cade ee magaalada Muqdisho.